Burcad badeed sii daysay shaqaale u dhashay dalka Siiriya – idalenews.com
Burcad badeed sii daysay shaqaale u dhashay dalka Siiriya
Burcad badeed Soomaali ah ayaa sii daysay saddex ruux oo u dhashay dalka Siiriya oo ay madaxfurasho u haysteen illaa iyo sanadkii 2010kii iyadoo aan la siin wax madaxfurasho ah.
Saddexda ruux ee la sii daayay ayaa waxa ay ka mid ahaayeen illaa iyo 19ruux oo ahaa shaqaale saarnaa markab xamuulka qaada oo sitey calanka Panama bishii December 2010 iyadoo afduubayaasha ay sheegeen inay qaateen lacag dhan 400,000 dollar. Balse aysan sii dayn lix ka mid ah shaqaalihii markabka ka shaqeeynayay.
Madaxweynaha maamulka Ximin iyo Xeeb Maxamed Aden Tiicey ayaa sheegay in cafis loo fidiyay kooxaha afduubayaasha ahaa oo aan wax madaxfurasho ahna la siin afduubayaasha.
Tiicey oo uu weheliyo mid kamid ah kooxda burcad badeeda ah oo lagu sheegay magaciisa Cabdqadir Afweyne ayaa ku wareejiyay dowlada saddexda nin ee Siiriyaanka ah ee afduubka loo haystay.
Cabdqadir Afweyne oo ah wiil uu dhalay Maxamed Cabdi Xasan oo ah hogaamiye burcad badeed ah ayaa haatan kala shaqeeya maamulka Ximin iyo Xeeb sidii loo joojin lahaa afduubka ka dhaca deegaano kamid ah dalka Soomaaliya.
Labadii sano ee la soo dhaafay ayaa waxaa hoos u dhac ku imanayay afduubka loo geysto maraakibta marta xeebta badweynta Hindiya.
Muwaadiniintan u dhashay dalka Siiriya ayaa lagu wareejiyay dowladda Soomaaliya, waxaana maanta ay ka soo dageen garoonka diyaaradaha Muqdisho, halkaasoo wariyeyaasha ay kula hadleen.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii boqolaal dhalinyaro Burcad badeed iyo hogaamiyahooda ay kaga dhawaaqeen degmada Cadaado inay ka tanaasuleen howlihii burcad badeednimo ee ay ku guda jireen muddo sanado ah.
Dowladda Faransiiska oo duqeyn cirka ku wada Islaamiyiinta Mali
Dowladda Soomaaliya oo cambaareysay howl galkii Faransiiska ka fuliyay Buulo Mareer